Washington oo taageereysa wada-hadalka Soomaaliya iyo Somaliland - calanka.com
Washington oo taageereysa wada-hadalka Soomaaliya iyo Somaliland (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Fantastic
Dowlada Mareykanka ayaa muujisay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan in ay sii socdaan wadahadalada u dhaxeeya xukuumada Somaliya iyo maamulka Somaliland ee 13-ka bishaan ka ka dhacay dalka Turkiga .
Warkaan ayaa yimid ka dib kulan wakiilka arimaha siyaasada ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Wendy Sherman kula qaadatay dalka Mareykanka madaxweynaha maamulkaas ee Axmed Siilaanayo oo Mareykanka booqanaya .
Sida wakaalada wararka kuwait tilmaameyso Mrs Wendy Sherman ayaa kala hadashay madaxweynaha maamulkaas Siilaanyo arimaha ku aadan amaanka , hir gilinta dimuqraadiyada iyo la dagaalanka aragagxisada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaarada arimaha dibada Mareykanka .
Xukuumada Washington ayaa ku boorisay in ay sii socdaan wadahadaladaas u dhaxeeya dowlada Somaliya iyo maamulkaas Somaliland halka sidoo kalena ay muujiyeen in ay sii wadayaan taageerada ku aadan ka shaqeynta midnimada Somaliya iyo deganaashaha dalkaas.
Dowlada Somaliya iyo maamulka Somaliland ayaa kulamo bishaan socota waxa ay ku yeesheen Ankra iyaga oo ku kala saxiixday hishiis ka kooban 7 qodob ,iyadoo maamulkaan shaaciyay in ay ka goosteen Somaliya sanadkii 1991-dii ayaan weli helin aqoonsi caalami ah taasi oo ay dadaal ugu jiraan Calanka.com: Isha wararka xaqiiqda